Uyabalisa 'owashadiswa nofakazi' - Ilanga News
Home Izindaba Uyabalisa ‘owashadiswa nofakazi’
Umkakhe owayeyobhala naye emahhovisi ezasekhaya akaveli esitifiketini somshado
USUPHENDUKE isiqalekiso nebhadi umshado wezithandani zaKwaMnqobokazi, eHluhluwe, ezabopha ifindo likasofasilahlane ngo-2009, njengoba zikhala ngokuthi usuziqothule ephaketheni zizama ukuwulungisa kwazise esitifiketini kuvela ukuthi indoda yashada nesihlobo sayo esasingufakazi ngosuku lomshado.
UMnu Nhlanhla Sibusiso Zikhali (44), nomkakhe obiza uNkz Zandile Maud Mlambo (42) ngenxa yaleli phutha njengoba kufanele abize uZikhali bathi bashada umshado wesintu esigcawini, emuva kwalo-kho baya emahhovisi omnyango wezasekhaya ukuyogcwalisa umshado wabo ngokwesilungu. “Ngoba kwakumele sibenofakazi, mina ngafakazelwa ngabazali bami, umyeni wami yena wafakazelwa nguNkz Ntombifuthi Mdluli oyisihlobo sakhe.
“Sethuka soma uma sekubuya incwadi yomshado ithi umyeni wami ushade noNkz Mdluli mina ngangingufakazi,” kusho uNkz Mlambo.
Uthi akayazi imali asebeyichithi-le nomyeni wakhe behla benyuka, bezama ukulungisa lolu daba.
Uthi baqala ukuzama ukulungisa leli phutha kusukela belibonile. Ngisho induna yenkosi eyayibashadisa yazama ukungenelela ko-dwa lutho ukusizakala njengoba kwayona seyaze yashona.
“Sakhuluma nekhansela elalikhona ngaleso sikhathi, lalusukumela udaba lwethu kodwa laze laphuma esikhundleni singasizakalanga.
“Umphathi wehhovisi lomnyango wezasekhaya eHluhluwe waze wathatha impesheni, kwangena omunye. Naye wazama konke okusemandleni ukulekelela kodwa kwanhlanga zimuka nomoya.
“Kasikhathazekile nje ngokuma kwezinto zethu kuphela, kepha nempilo kaNkz Mdluli seyiphazamisekile,” kusho yena.
Uthi akasitholi isibonelelo saba-ngasebenzi ngenxa yayo le nkinga. “Ngenhlanhla nje, izingane zami ziyayihola imali yesibonelelo futhi zibiza isibongo sikayise, inkinga nje iba kithina sobabili nobaba, kasikwazi ukwenza izinto ezisihlanganisayo njengabantu abasha-dile,” kusho yena.
Uthi kawupheli unyaka bengayanga emahhovisi omnyango wezasekhaya beyobheka ukuthi kalu-kho yini ushintsho.
UMnu Zikhali utshele ILANGA ukuthi useke waqhamuka nesixazululo sokuthi yena noNkz Mdluli bahlukanise ngokusemthethweni ukuze akwazi ukuqala phansi ashade noNkz Mlambo.
“Bavele basitshele ukuthi kwa-khona ukuhlukanisa ngeke kwenzeke ngoba kuvela ukuthi udaba lwethu luyalungiswa ePretoria,” kusho yena.
Uthi sekuthi uma engena emahhovisi ezasekhaya eHluhluwe, izisebenzi zivele zishayane ngamakhanda ngoba zithi nazo kazisazi ukuthi zingasiza kanjani.
“Ngisho ikhansela elikhona njengamanje, seligijime kwaphela amandla nakulona ngoba lifike litshelwe into efanayo nesitshelwa yona.
“Inkinga enkulu manje wukuthi ngisho izingane zesihlobo sami (uNkz Mdluli), zivela njengezingane zami uma zenzelwa izitifiketi.
“Enye inkinga wukuthi kuzokwenzekani uma efisa ukushada noyise wezingane zakhe, njengoba ku-vela ukuthi ushade nami,” kusho yena.
Uthi ufisa ukuthi kuxazululeke le ngwadla abhekene nayo yikhona ezokwazi ukushada noNkz Mlambo, bese edlulela engodusweni yakhe yesibili osekusele ukuthi bashade nje nayo ngoba usekwenze konke. “Kumanje kuphazami-seke ukuthi ngiqhubeke nezinhlelo zokushada nengoduso yami yesibili,” kusho yena.
Ikhansela lendawo, uMnu Bongani Ngwane, lithe selihambe lakhathala lizama ukulungisa.
“Ngiyalwazi impela udaba lwabo, futhi ngiba buhlungu kakhulu ngalo ngoba luyangehlula. Uma ngiya emahhovisi, ngitshelwa ukuthi lusePretoria, luyasetshenzwa.
“Selokhu ngalwazi, kangazi ukuthi lusetshenzwa ndlelani isikhathi eside kangaka. Ngiyafisa nje udaba lwabo lulungiseke,” kusho uMnu Ngwane.
UMnu Mbongeni Magagula woMnyango wezaseKhaya, ucele ukuthunyelelwa imininingwane kaMnu Zikhali noNkz Mlambo, wathi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubalekelela. “Sizoxhumana nabathintekayo, sizame ukululandela udaba ukuze basizakale.
“Sesiside kakhulu isikhathi bebhekene nale nkinga,” kusho yena.
Previous articleUgwaze isoka efuna imali yokukhipha ‘isisu’
Next articleIngebhe ngethuna lenyanga engcwatshwe esigodlweni sayo